AIRTOX Kabaha badbaadada TX11 - AIRTOX
Kuwa aadka u horumarsan Airtox qaabka TX11 waxaa lagu gartaa dhowr ah super features, sida lakabka kacdoonka kahortagga gelitaanka: WHITELAYER® - adag sida bir oo jilicsan sida dharka jikada. Iyadoo WHITELAYER®, Airtox waxay abuurtay tikniyoolajiyad dhulka hoosaad u ah oo ka dhigaysa TX11 marka laga reebo kabaha kale ee amniga ee suuqa aad maanta garan karto.
TX11 wuxuu ku qalabaysan yahay fududaanta dusha iyo banaanka AIRTOX Nidaamka lebbiska caqliga leh ee PRO.
Waxa lagu heli karaa hal nooc midab: madow (midabyo kala duwan oo midab ah eeg TX22, TX33, ee nooca leh xarkaha kabaha ayaa leh muuqaal TX1, TX2 or TX3, ee nooca kabaha dhexe - eeg TX66).
Kuwa aadka u horumarsan Airtox qaabka TX11 waxaa lagu gartaa dhowr ah super features, sida lakabka kacdoonka kahortagga gelitaanka: WHITELAYER® - adag sida bir oo jilicsan ...